zkipster: Vahaolana ho an'ny lisitry ny vahiny sy ny fihaonambe | Martech Zone
Ny harivan'iny dia nanamarina ilay hetsika aho. Io ilay fandaharana mahazatra… ireo olona vitsivitsy mpitantana mikotrana mba hanamarina ny anarako avy amin'ny lisitra mpanatrika pirinty marobe. Mandany minitra vitsivitsy handefasana azy io dia hitan'izy ireo amin'ny farany ny anarako ary aparitaho - avy eo mifampiresaka mba hahafahan'ny rehetra manamarina izany. Amin'ny hetsika lehibe kokoa alehako dia abidia ny fanamarihana… ary ny K hatrany no andalana lava indrindra! Ireo olona any amin'ny faran'ny abidia dia mitsangantsangana.
Tiako ny misy olona eto amin'izao tontolo izao izay mino fa ireo no olana mety ho mora raisina amin'ny teknolojia. Ireo olona ao zkipster nanao izany fotsiny, ny fananganana rindranasa rahona ho an'ny takelaka sy finday avo lenta izay ahafahan'ny mpiasan'ny hetsika mahita sy mijery ny mpanatrika mora foana. Izay rehetra manamarina ny olona dia havaozina ho azy satria izy ireo dia miasa amin'ny fampiharana iray ihany.
Ho fanampin'izay, manana endri-javatra manampy izy ireo mba hanakanana ny mpisandoka tsy hiditra an-tsehatra amin'ny hetsikao. Ny sary dia miraikitra amin'ny lisitry ny mpanatrika anao hahafahanao manamarina azy ireo rehefa manamarina ny hetsika izy ireo. Azonao atao aza ny mandefa fanairana ny rafitra rehefa tonga ny mpanatrika VIP. Hevitra tsara!
Tags: lisitry ny mpanatrikalisitry ny vahinyzkipster